अनुक्रमणिकाको सूचक - Geofumadas
यो पृष्ठ ब्ल्याकमा सबै भन्दा अधिक प्रयोग गरिएका शीर्षकहरू आदेश गर्नको खोजीमा, निर्माण अन्तर्गत छ; यद्यपि यो पोष्टमा तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ सबै प्रोग्रामहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् जुन Geofumadas बारेमा बोलेको छ.
AutoCAD डाउनलोड गर्नुहोस्
ओटो सीएड सिविल एक्सएनएमएक्सएक्सडी
AutoCAD को साथ ट्रिक्स
एक्सेलको साथ एकीकरण
GIS सँग एकीकरण
प्रशिक्षण र म्यानुअल्स
अन्य AutoDesk उत्पादनहरू
AutoCAD को बारेमा
ArcGIS सँग कसरी गर्ने?
अन्यसँग तुलना गर्नुहोस्
ESRI को बारेमा
CAD सँग एकीकरण
Google सँग एकीकरण
छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
GIS सँग एकीकरण गर्नुहोस्
CAD सँग एकीकृत
गुगल अर्थको परिशुद्धता
क्याडस्ट्रे को लागि धोखा देती छ
Microstation संग ट्रिक्स
अन्य बेन्टले उत्पादनहरू
Microstation को बारे मा
सम्मेलनहरू र कार्यक्रमहरू
यसलाई कसरी गर्ने?
GIF को बारे मा Manifold
लेखहरू जहाँ उल्लेख गरिएको छ
GvSIG सँग कसरी गर्ने?
GvSIG को बारेमा
प्रशिक्षण र सम्मेलनहरू
GvSIG प्रयोग गर्दै
टेक्नोलोजीहरु संग ट्रिक्स
सर्वेक्षण र उपकरण
जीपीएस र उपकरण
AutoCAD को प्रयोग गरेर सर्वेक्षण गर्दै
Microstation प्रयोग गरेर सर्वेक्षण गर्दै
टोपोग्राफी र जीआईएस
सर्वेक्षण र पाठ्यक्रमहरू सर्वेक्षण गर्दै
मोबाइलमा GPS को प्रयोग गर्नुहोस्
लेखहरू जहाँ GPS ले बोल्छ
RENOT प्रयास गर्नुहोस्
शुभ साँझ, तपाई मलाई बताउन सक्नुहुनेछ कि म नदीहरु र हन्डुरस को सडकहरु कहाँ पुग्न सक्छु। वा तिनीहरू भाग्य पृष्ठहरु र आईसीएफको भौगोलिक पदबाट हो।
कठिन छ। तिनीहरू देशमा कहीं पनि हुन सक्थे।
सोध्नुहोस्, म विद्यार्थी र अभ्यासहरू GEOMATICA गर्दैछु, मबाट Google धरती आएको हवाई फोटो प्रदान, तर तपाईं आफ्नो स्थान पाउन सक्छ रूप, आफ्नो स्थान, भनेर मेक्सिको साथै हो थाहा छ?
ह्याक्टर डोनाटो मन्टानाज भन्छिन्:
म तपाईंलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईंले गल्तीले सार्वजनिक रूपमा निजी पेसेरो ईचागी ओस्टे एन ° १149 located मा अवस्थित निजी मार्ग लिनुभएको छ र यसले Calle Sarmiento Norte सँग सम्पर्क राख्दछ जहाँ गोपनीयता गेट छ, यो साइट सैन जुआन - राजधानीमा अवस्थित छ। सैन जुआन, अर्जेन्टिना रिपब्लिक प्रान्तको। पेद्रो Echagüe सडकमा यसको गेट नभएको तथ्यले यो सार्वजनिक हो भनेर संकेत गर्दैन। त्यसकारण, म अनुरोध गर्छु कि आवश्यक सावधानीहरू मैले पहिले के भनिरहेछु के सही हो भनि पत्ता लगाउन र यदि यो हो भने, म अनुरोध गर्छु कि सर्कुलेशनका छविहरू मेटाइनेछ।
Exel टेम्प्लेटको साथ। माथिल्लो सेक्शनमा लिङ्क हो।
utm मा दशमलव भौगोलिक समकक्षहरूको सूची कसरी परिवर्तित गर्ने?
तपाईं बढी विशिष्ट हुनुपर्दछ।
सामान्यतया, तपाईँले समन्वय प्रणाली असाइन गर्नु पर्छ,
त्यसपछि तपाईं यसलाई एक ज्ञात सन्दर्भ बिन्दुमा सार्न चाहन्छ, र आवश्यक भएमा घुमाउनुहोस्।
हामीलाई सम्पादकमा (मा) geofumadas लेख्नुहोस्। com र हामी यो विस्तार मा अधिक जानकारी को वर्णन गर्नेछौं।
एक DXF फाइल हो कि नै एक समन्वय फ्रेम समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ रूपमा म refernciar गर्न सक्नुहुन्छ? म MicroStation मन थप fácil..pero छ संग लाग्छ ..
मेरो एउटा क्वेरी छ, किनकि म सम्वोध मानको सन्दर्भमा गलत आयाम मानहरू पत्ता लगाउन चाहन्छु।
यदि तपाईं हन्डुरुर कानुनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने:
- मानौं तिनीहरूले दुई वर्ष भित्र शहरी क्याडेटस्ट्रा सर्वेक्षण सुरु गर्छन्: कस्ता मूल्यहरू उनीहरूले लागू गर्नेछन्? यदि तिनीहरूसँग मानहरू छन् र सहमत भएन भने, तिनीहरू 100% लागू गर्न पर्छ।
100% कारण मान संकलन गर्न तिनीहरूलाई आवश्यक थियो यदि तपाईं नदेखाउनुहोस् मान प्रमाण निष्कर्षमा थिए, के को हेरविचार गर्नुपर्छ, लेखा को उच्च न्यायालय को सम्भावित आपत्ति छ।
सम्झौता एक भूमिका निभाउँछ, ताकि प्रभाव कैदस्ट्रे प्रविधि हुन्छ जब प्रभाव धेरै उच्च छैन।
अर्को पहलू, के मूल्यहरु को किस प्रकार को मान्नु भनेको एक छ? के यो भवनहरु, वर्तमान मूल्यहरु संग छ? के यो शहरी भूमि मानहरू समावेश गर्दछ? के यसले ग्रामीण भूमि मान र स्थायी फसलहरू समावेश गर्दछ?
यदि तिनीहरू नयाँ मानिएका सूचीबद्ध छन्, अद्यावधिक गरिएका मानहरूसँग। तिनीहरूलाई 100 मा लागू गर्नाले नकारात्मक असर पर्थ्यो, किनभने मानिसहरू, उनीहरूलाई चिन्तित गरेर भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिन्छ भने, वा सँधै भुक्तान गर्नुभएन भने, बलियो झटका लगाउनेछ। यो लाभको सट्टा, पूर्वनिर्धारित वृद्धि हुनेछ, किनभने मानिसहरू मात्र तिर्नुपर्ने बेला हेर्न को लागी नगर पालिकामा जाने जाँदैछन्, र जब तिनीहरू मूल्य थाहा पाउनेछन् केवल वरपर घुमाउनेछ।
त्यसकारण, त्यो सम्झौता आवश्यक छ। TSC ले खुल्ला परिषदको कार्यलाई समर्थन गर्न र प्रविधिको प्रभावलाई बढावा गर्न समर्थन गर्दछ।
Yaredi Harobi Mejia Paredes भन्छिन्:
केही नगरपालिका मान क्याटलग छ पाँच वर्ष 2015-2019, तर त्यहाँ कुनै cadastral सर्वेक्षण प्रविधी शहरी छ, सही Cadastral विभाग शुरू परामर्श यी मान वा सबै भन्दा राम्रो चरण रूपमा त्यहाँ ग्रामीण लिन के प्रक्रियाहरु हुनेछ 30% technified विद्रोह, यस्तो अवस्थामा के गर्न।
लुइस आर्मोडो रजस भन्छिन्:
शुभ प्रभात, म कहाँ काम कम्पनी, एक ड्रोन, multispectral क्यामेरा र photogrammetric, उडान योजना र छवि विश्लेषण लागि सफ्टवेयर लगायत, प्राप्त UAVs प्रयोग गरेर बाली को निरीक्षण र पशुधन अनुमति रुचि छ को वास्तविक समयमा किरा नियन्त्रण र प्रजाति र सिंचाई को गुणस्तर मूल्यांकन, आफ्नो दक्षता सुधार गर्न विभिन्न होल्डिंग्स स्थिति जान्न।
म तपाईंको प्रस्ताव चाहन्छु
तिनीहरूको केही दिनचर्या छ जुन रेखाचित्रमा चिनिन्छ जुन रेखाहरू वा पोलीनिनास वा ओटोकोड वा माइक्रोस्टेशनको चौराह हो।
युटिएम निर्देशांक भएको फाइल KML Google चूल्हा (20 अंक) र प्रत्येक समन्वय लागि परिचायक उत्पन्न, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (आईडी, अक्षांश, देशान्तर), युटिएम 8L980G क्षेत्र 14 462223.62 पु क्यू एम एन ई 2256691.52 मा विधा फाइल KML । तर AutoCAD DWG गर्न रूपान्तरण गर्न मलाई दुई फरक डाटा परिचायक दिन्छ एक हात र अर्कोतर्फ मलाई जो जाँदै छ अंक, दिन्छ ??????